Burmese taste - Iora: အပျော်နေ့ လေးတစ်နေ့ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ
အပျော်နေ့ လေးတစ်နေ့ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ
ကြက်ဥဆီပြန်၊ ၀က်သားအချိုချက်၊ ဘူးသီးနဲ့ ကြာဆံဟင်းခါး၊ မန်ကျည်းသီးထောင်း ငပိရည်ကျိုချက် နဲ့ တုို့ စရာ
သိပ်ကြာသွားမှာစုိုးလုို့ မြန်မြန်ကောက်တင်လိုက်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်ကတင်ထားတာရဲ့ အဆက်လို့ ပြောရမ
လား တစ်ဝက်လို့ ပြောရမလားဘဲ။ အချိန်လည်းသိပ်မရှိတော့မထူးဆန်းတဲ့ချက်နည်းတွေမရေးတော့ဘူးနော်။ အရင်ကလည်းတင်ပြီးသားတွေဘဲလေနော်။
ကင်းပုံသီးချက်တာပါ။ ကြက်သွန်ဖြူနီကြိတ်ထားတာကိုဆီအရင်သတ်။ မွှေးပြီးနဲနဲခြောက်လာတော့ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ထဲ့၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးတစိတ်လောက်ဖဲ့ညှပ်ထဲ့။ ပြီးတော့ကင်းပုံသီးထုထားတာတွေထဲ့။ ဒီတစ်ခေါက်တော့အဖတ်ကြီးကြီးစားချင်လို့ သိပ်သေးသေးမဖဲ့ပစ်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့်ဆုိုရင်တော့ထုထားတာကိုခပ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေဖဲ့ပြီး မျှစ်နဲ့ ချက်ပါတယ်။ မျှစ်ထဲ့ရင်ရုံးယူရင်အနံ့ နံမှာစိုးလို့ မထဲ့တော့ဘူး။ ကင်းပုံသီးထဲ့ပြီးဆား၊ ငံပြာရည်ထဲ့ လုံးထား။ မအိသေးတော့ရေလေးနဲနဲထပ်ထဲ့ပေါ့ အဖုံးအုပ်ပြန်တည်။ အုိုင်အိုရာကနှပ်သလိုမျိုးစားချင်လို့ ရေနှစ်ခါသုံးခါလောက်နဲနဲချင်းထဲ့ပြီးတည်ထားတာပါ။ နောက်ဆုံးကျငရုတ်သီး
ကြက်ကိုအကောင်လိုက်ချက်စားရတာကြိုက်လို့ ခုနောက်ပိုင်းအချိန်ရတိုင်းအကောင်လိုက်ပဲချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုိုးရုိုးဆီပြန်ချက်ထားတာပါ။ ဆီမကြိုက်သူတွေအသားလေးပဲဆည်စားနော်။ တပါတ်စာရုံးသွားရင်ယူသွားနုိုင်အောင်ချက်ထားတာပါ။ အခါခါခွဲခွဲခပ်ထဲ့ရတော့နောက်ဆုံးကျဆီလည်းအုိုးထဲသိပ်မကျန်တော့ပါဘူး။ ထမင်းဘူးကပြန်ပါလာရင်ဆေးပစ်လိုက်တော့ဆေးတဲ့ထဲပါတာခပ်များများ။
ကင်းပုံသီးဟင်းကျက်ပြီ။ ကြိုက်သလောက်ထဲ့စား။ ဒါကတကယ်တော့ကြက်သားနဲ့ ကင်းပုံသီးကပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်ကချက်စားထားတာပါ။
ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်ပုံကောင်းကောင်းမရှာနုိုင်လို့ ပါလာတာဘဲတင်လိုက်တယ်။ ချစ်ချစ်ကခြောက်နေမှစားလို့ တော်တော်ခြောက်ခြောက်လေးကြော်ထားတာပါ။ ခြောက်ရင်မခါးသလောက်ပဲဆုိုတော့သူကကြိုက်တယ်လေ။
လာပါပြီ ကဆစ်သီးလို့ ထင်တဲ့အသီး (ချစ်စရာလေးတွေနော်။)
အလူမီနမ်ဖွိုင်လ်နဲ့ ပတ်ပြီးအာဗင်ထဲမှာဖုတ်ထားတာပါ။ မပေါက်အောင်လို့ ခရင်းနဲ့ ဖေါက်ထားတာလေ။
ထက်ခြမ်းခွဲပြီးအသားလေးတွေခြစ်ယူတော့ဒီလိုအခွံလေးတွေကျန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဝါးကြည့်တော့အရမ်းနုပြီးချိုနေလို့ အခွံတွေပါပြန်ထဲ့ကြိတ်လိုက်တော့တယ်။း)
စုပြောသလုိုဘဲ။ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ငပိနဲ့ ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ရောကြိတ်ထားတာပါ။
ကဆစ်သီးလို့ ထင်တဲ့အသီးထောင်းရပါပြီဘယ်ဘက်က။ စုလုပ်တာတော့ကြက်သွန်နီထဲ့တယ်။ ကုိုယ်က ကြာကြာထားရင်ညီးစော်နံသွားမှာစုိုးလို့ မထဲ့ထားဘူး။ စားလို့ တော့တကယ်ကောင်း။ အစေ့လေးတွေကလည်းပြောင်းဖူးနုနုလေးကျနေတာဘဲတော်တော်ချိုတယ်။ ငံငံစပ်စပ်ချိုခါးမှာအနံ့ လေးကလည်းမီးဖုတ်ပြီးဆီစိမ်းလေးစမ်းထားတော့မွှေးနေတာဘဲ။ (စုလေးရေ ကျေးဇူးနော်။) ညာဘက်ကငပိထောင်း။ ငပိပိုဖုတ်ပြီးငပိထောင်းပါလုပ်ထားလိုက်တယ်။ ငပိထောင်းလည်းကုန်နေလို့ လေ။
ငရုတ်သီးခြောက်ကြော်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းမီးကင်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ကြက်သွန်ဖြူများများနဲ့ ကြိတ်ထားတဲ့အုိုင်အိုရာ့အကြိုက်ငပိထောင်း
ကုိုယ်တုိုင်လုပ်ထားတဲ့ငါးချဉ်။ တော်တော်စားလို့ ကောင်းတယ်။
ချခါနီးတော့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ နံနံပင်အုပ်။ သူလည်းမွှေးနေတာဘဲ။
ဒါကကြားဖြတ်။ နှင်းမကျတဲ့အရပ်မှာနှင်းတွေကျလို့ ထူးထူးခြားခြားမုို့ ရုိုက်ထားတာ။ အဲဒီပုိုက်အောက်ကစနုိုးတွေ။ နယူးယောက်ဘက်ကလူတွေကတော့ရီတာပေါ့ရီတာပေါ့ဆုို..ပြောတော့မှာ။ အဟက်..
ဒါကအဲဒီနေ့ က၀ယ်လာတဲ့ဘူးသီးတစ်လုံးကိုကြော်စားတာပါ။ တစ်ယောက်စာထဲမို့ အားတော့နာပါတယ်နည်းနည်းလေးဖြစ်နေတယ်။
၀က်သားအချိုချက် ကမန်ကျည်းသီးစိမ်းထောင်းနဲ့ လိုက်လို့ အချိုချက်လိုက်တာလေ။
ကြက်ဥ ပုဇွန်ခြောက် ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ဆီပြန်ချက်
ငပိရည်ကျိုငပိချက်။ တကယ်တော့အဲဒီအရင်ကရခုိုင်မုန့် တီချက်စားထားတာ။ ငရုတ်သီးစိမ်းအနှစ်ထောင်းတွေအများကြီးကျန်နေလို့ ဝယ်လာတာတွေနဲ့ တုို့ စားလို့ ရအောင်ချက်လိုက်တာပါ။ ငါးနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းတွေနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီကိုဆီနည်းနည်းလေးနဲ့ အရင်သတ်ပြီးမှငပိရည်ကျိုကုိုထဲ့ချက်လိုက်တာပါ။ ပွက်ပွက်ဆူပြီးခဏနေတော့အရသာမြည်းပြီးနံနံပင်အုပ်တာပေါ့။
မန်ကျည်သီးစိမ်းထောင်းကိုအပေါ်ယံလေးဆီစိမ်းစမ်းထားပါတယ်။ ခုကြည့်ရင်းနဲ့ တောင်ပြန်စားချင်လာပြီ။ ကျန်သေးတယ် တစ်ခါစာချက်စားမလားလို့ ။
တက်စာတွေချည့်ပဲ။ လုပ်လုိုက်ရင်အဲလို။ နဲနဲပဲစားတာပေါ့။ ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ ခရမ်းသီးကလည်းအရမ်းလတ်တော့ပြုတ်တုို့ လိုက်တာ။ မျှစ်ကတော့ဘူးဖေါက်ပြီးပြန်ပြုတ်ထားတာပါ။
မုန့် ဟင်းခါးနောက်နေ့ ချက်စားလို့ ဝယ်လာတဲ့ဘူးသီးကုိုကြော်စားတာပါ။
နောက်နေ့ ကျတော့ပဲကြော်ပါကြော်လုိုက်သေးတယ်။ သူများလို တစ်ချပ်ချင်းကြော်နေရမှာစိတ်မရှည်အချိန်ကုန်တော့တစ်ချပ်တစ်ချပ်ကိုအဲလောက်ကြီးဒယ်အပြည့်ထဲ့ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ချေပစ်ရမှာဘဲနော့်။း)
Labels: bamboo shoot, chili, Dried Shrimp, Egg, fish paste, Food, Pickled food, Pork, Side dish, Soup, spicy paste, Veggie
မြတ်ကြည် February 9, 2014 at 11:48 PM
ငါးငပိရည်​ကျိုချက်​ အ၇မ်းကြိုက်​တာ,၊ ချက်​နည်းမှတ်​သွားတယ်​။ မမရဲ့ ကဆစ်​သီး​ထောင်းလည်း စားဖူးကြည့်​ချင်​လိုက်​တာ။
စံပယ်ချို February 10, 2014 at 3:05 PM
မန်ကျည်းသီးထောင်း ငပိရည်ကျိုချက် နဲ့ တုို့ စရာ-------စားချင်တာတွေများလို့ဘာတွေစားရမလဲတောင်မသိတော့ပါဘူး
ငါးချဉ်နဲ့ --ပုဇွန်ချဉ် လုပ်နည်းလေးပြောပြပေးပါ---ကျေးဇူးတင်လျှက်
Iora February 10, 2014 at 6:51 PM
ငါးငပိရည်ကျိုချက်နဲ့ နယ်ထားတဲ့ထမင်းဆုိုအသားတောင်မလိုဘူးနော်။ စားလို့ သိပ်ကောင်းတာ။
ကဆစ်သီးထောင်းစားလို့ ကောင်းတယ်။ စု ကုိုကျေးဇူးတင်နေတာ။ နုို့ မို့ ရင်ချက်ပဲစားဖြစ်မှာ။ ကဆစ်သီးတောင်မှမမြင်ဘူးတာကိုးလေ။
Search this blog..box မှာပုဇွန်ချဉ်လို့ ရုိုက်ပြီးရှာလိုက်နော်။
San Htun February 10, 2014 at 8:48 PM
ကဆစ်သီးနဲ့ကင်ပုံသီးကို မသိဘူးရယ်..ခုတော့ သိသွားပြီ...မနေ့ က မြန်မာဆိုင်ကနေ ပုဇွန်ချဉ်နဲ့ ငါးချဉ် ဝယ်လာတာ...သုတ်စားမယ်လို့ တွေးနေတာ..ခုတော့ ကြော်စားဖို့ တမယ် တိုးပြီ...ဗိုက်တောင် ဆာသွားပြီ...မြိန်လိုက်တဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေး...နယူးယောက်ကသူတွေက အဲဒီနှင်းလောက်ဆို ချစ်မှာ..ခုတော့ ရေခဲထဲ မချောအောင် လျှောက်ရ၊ နှင်းတွေ တူးရ၊ အေးလွန်းလို့နွေရယ် မြန်မြန်ရောက်ပါတော့လို့တနေကြလေရဲ့ ...
Iora February 11, 2014 at 5:55 PM
ပုဇွန်ချဉ်သုတ်စားလည်းကောင်းတာဘဲ။ ချစ်ချစ်ကအဲဒါတွေဆုိုသုတ်မှကြိုက်တယ်။ ကုိုယ်ကတော့ကြော်ထားတဲ့အနှစ်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်။
စန်းထွန်းလည်းခုနယူးယောက်သူဖြစ်သွားပြီဆုိုတော့အဲလိုပဲတနေမှာပေါ့။ အဲဒီရက်လေးနှစ်ရက်ကုိုကားကရေခဲတွေခွာရထုိုးရနဲ့ စနုိုးတွေအရမ်းကျတဲ့စန်းထွန်းတုို့ ဘေဘီတုို့ သက်တုို့မီးမီးတုို့ ဖက်ဆုိုစိတ်ညစ်စရာကြီးလို့ တွေးနေတာ။
Aung Htut February 10, 2014 at 8:51 PM
ကဆစ်သီးကို အခုမှ မြင်ဖူးတော့တယ်.... တစ်ဝကြီး စားသွားပြီ.... :P
Iora February 11, 2014 at 5:59 PM
ကျမလည်းပုံကုိုသေသေချာချာခဏခဏကြည့်ထားလို့ ဒါကဆစ်သီးပဲလို့ ထင်လိုက်တာ။
မိုးငွေ့........ February 11, 2014 at 1:37 AM
မကျည်းသီးထောင်းစားဦးမယ်...ဟင်းတွေအားလုံးကို မနေ့ညသန်းခေါင်လောက်ကြီးဝင်ကြည့်မိတာ ..ဗိုက်တော်တော်ဆာသွားတယ်...။
Iora February 11, 2014 at 6:07 PM
မန်ကျည်းသီးစိမ်းကိုလေမစားရတာကြာလှပြီ။ ကုိုယ်သွားသမျှကုလားဆုိုင်တွေမှာ လယ်သမားဈေးတွေမှာ တရုတ်ဆုိုင်တွေမှာ အမြဲရှာတယ်။ တခါမှမတွေ့ ဘူး။ ဒီတခေါက်မှပေါ်ချိန်နဲ့ တိုက်တုိုက်ဆုိုင်ဆုိုင်ဆုိုင်ပစ္စည်းလာချိန်နဲ့ ကုိုက်လို့ ကံကောင်းပြီးစားရတာ။
ဒီတပါတ်ကျန်တာလေးကိုပုဇွန်နဲ့ ချက်စားမယ်လို့ တွေးနေတာ။ မြန်မာပင်စိမ်းလေးနဲ့ ဆိုကောင်းမှာ။ ဒီမှာကဘိုပင်စိမ်းတွေပဲရှိတယ်။ ကဲ...ခုမိုးလင်းနေပြီ။ ချက်စားတော့နော်။း)
လသာည February 11, 2014 at 6:25 AM
ဘူးပဲ မုန့်ဟင်းခါးကို မြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာ တံတွေးတချက်ကို ခမန်းခတန်း မျိုချလိုက်ရတယ် :)
Iora February 11, 2014 at 6:13 PM
ခဏခဏချက်စားလည်းစားချင်နေတာဘဲမုန့် ဟင်းခါးကို။း)
စူးနှယျလေး February 11, 2014 at 6:33 AM
အကြိုက်တွေချည်းပဲ ဟင့်.... မင်ြသာမြင်ရ မကြင်ရဘူး..
Iora February 11, 2014 at 6:17 PM
ကုိုယ်သိတယ်။ ကုိုယ်နဲ့ စူးနွယ်နဲ့ အကြိုက်တူတယ်ဆုိုတာ ဟုိုးတုန်းကတည်းက။
စူးနှယျလေး February 21, 2014 at 7:24 AM
ဒီတခါရော အကြိုက် တူသေးလားဟင် :D
Iora February 21, 2014 at 6:54 PM
စူးနွယ်လေး font ပြောင်းလုိုက်ကတည်းကကုိုယ်ဖတ်လို့ မရတော့တာ။ ဒါပေမဲ့အသစ်တင်တုိုင်းလာပြီးမှန်းပြီးဖတ်ကြည့်တယ်။ အဲဒီအောက်ဆုံးမှာမေးထားတာမှန်းဖတ်ပြီးဖြေချင်နေတာ။း)
အကြိုက်တူသေးတယ်နော်။ ကုိုယ်ကပဲပုတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကြိုက်တယ်။ စူကာညွန့် အရမ်းကြိုက်။
ငါးခြောက်ဖုတ်၊ ငါးပိကောင်မကြိုက်လူမိုက်လို့ တောင်ဆုိုချင်တာ။ မျှစ်သုတ်လေးကကြည့်ရင်းနဲ့ တောင်မွှေးလာသလို။ တကယ်။
စူးနှယျလေး February 21, 2014 at 11:54 PM
ယူနီကုဒ်ဖွန့် Myanmar3 ပြောင်းသုံးလိုက်တာ လာဖတ်တဲ့သူ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက် နည်းသွားတာ သိတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ကြိုက်တာကိုးနော် :)
ငါးပိငါးခြောက်တော့ ဘာကြိုက်သလဲ မမေးနဲ့...ဒါတောင် ငါးလူး ငါးပိကောင် စားချင်တာ အဲဒီဘက်မှာ မရလို့ မစားလိုက်ရဘူး။
ငါးလူးငါးပိကောင် သိလား..ငါးလူးငါးက အကောင်သေးလေးတွေ..အဲဒါကို ဗိုက်မဖောက်ဘဲ ငါးပိကောင်လုပ်ထားတာ။
နည်းနည်း သက်တယ်။ ကြော်ပြီး ဂျူးမြစ်လေးနဲ့ အိုးကပ်လေး ပြန်ချက်စား..ကောင်းမှကောင်း၊
Iora February 22, 2014 at 9:38 AM
Myanmar3 font ကုို ကုိုယ်ကယ်လီဖုိုးနီးယားမှာကျောင်းတက်တုန်းကကုိုယ့်ရဲ့ မာစတာစာတမ်းတစိတ်ဒေသမှာ အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ မြန်မာလိုတွဲထဲ့ပေးရတာစာမျက်နှာ ၂၀ လောက်ပါတော့အဲဒါကိုသုံးတာ။ အဲတုံးကကုိုယ်သုံးတာက ပန်းသီးမက်ကွန်ပြူတာ(ခုရောပါဘဲ)။ အဲဒါမက်နဲ့ ကအဲတုံးက မြန်မာ၃ ဖွန့် သုံးမှအဆင်ပြေတယ်။ မြန်မာဖွန့် တွေက၀င်းဒုိုးနဲ့ ဆုိုအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ကုိုယ့်ရဲ့ အဲဒီစာကြမ်းကိုစမစ်ဆုိုနီယမ်က ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်ကလည်း edit လုပ်တော့ သူ့ စီကုို အီးမေးလ်နဲ့ တလျှောက်လုံးအမြဲပို့ ရတယ်။ တစ်ခြားဖွန့် တွေကအမှားတွေပေါ်ပေါ်ပြီး ဟုိုပုို့ ဒီပို့ မှာ ပြောင်းပြောင်းကုန် ပြီးတော့ပတ်ဆင့်တွေပါရင်ရုိုက်မရ။ မြန်မာ၃ နဲ့ မှအဆင်ပြေသွားခဲ့တာ။ သူလည်းမြန်မာစာမတတ်ပေမဲ့မြန်မာ၃ ကိုအင်စတောလ်လုပ်ထားခဲ့ရတယ် ကိုယ့်စာတမ်းအတွက်။ ဒါနဲ့ အင်စတောလ်လုပ်ပြီးစာတမ်းတင်စာအုပ်ထုတ်တဲ့ထိအဲဒါနဲ့ သုံးခဲ့ရတယ်။ ဒီဘလော့မှာကျတော့ဇော်ဂျီဝမ်းကိုစသုံးပြီးသဘောကျလို့ ဇော်ဂျီဝမ်းကုိုသုံးတာ။ တခါကျတော့ဖွန့် တွေပုံမှန်မပေါ်တော့လို့ မနဲ လျှောက်ဖတ်ပြီးပြန်ကုထားရတာ။ ဘလော့လေးပျက်သွားမှာစုိုးလို့ လေ။ကံကောင်းတော့တော်တော်ကြာကြာဟုိုဖတ်ဒီဖတ်လုပ်ရင်းပြန်ကောင်းသွားတာ။ ကုိုယ့်လက်ပ်တော့ကိုမကလိရဲသေးဘူး။ စူးနွယ်စီစာလာဖတ်တို်င်းကလိချင်နေတာ။ လောလောဆယ်လည်းအသစ်မ၀ယ်ချင်သေးတော့မကလိသေးတာ။ အသစ်ဝယ်ပြီးရင်တော့ကလိတော့မှာ။
ကဲ..အာလူးကများသွားပြီ။ ငါးလူးကိုသိတယ်။ ငါးလူးကုိုငါးပိကောင်အနေနဲ့ တော့မစားဖူးဘူးရယ်။ ငါးလူးကိုကုိုယ်တုို့ အိမ်ကအုိုးကပ်ချက်တယ်။ ငါးပိချက်ချက်တယ်။ ချဉ်ရည်ဟင်းထဲထဲ့တယ်။ ငါးပိရည်ဖျော်ရင်မိးကင်ပြီးထဲ့တယ်။ ဟင်းချိုထဲလည်းထဲ့တာပါဘဲ။
စူးနွယ်ပြောတာနဲ့ ကုိုယ်စားချင်လာပြီ။ ဒီမှာဂျူးမြစ်လုံးဝကုိုမမြင်ဖူးဘူး။ အပင်တွေကျတော့ရောင်းတယ်ကွာ။ အဲဒါလည်းတရုတ်ဆုိုင်မှာပါ။ ကုိုယ်တုို့ ကအမြစ်ပဲစားတာအပင်ဆုိုသိပ်ထဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။
စူးနှယျလေး February 22, 2014 at 10:26 AM
ငါးလူးကို မသိလောက်ဘူး မှတ်နေတာ :)
ငါးလူးငါးပိကောင်ကို ငါးပိချေးခါး လို့ အိမ်ကခေါ်တယ်။ ဗိုက်မဖောက်တော့ ခါးသက်သက်လေးမို့လို့လေ။ အရမ်းကြိုက်တာ။ သူက တအားမခြောက်ဘူး ခပ်စိုစိုလေးရယ်။ မစားရတာ ကြာလှပြီ။
ဂျူးမြစ်ကို အခု ကိုးရီးယားကို ဆေးဘက်ဝင်အဖြစ် အမှုန့်လုပ်ပို့နေကြတယ် ကြားတယ်။ အဲဒါ ရေးခဲ့ဖို့ မေ့သွားလို့ ခုမှပြန်သွားရေးထားလိုက်သေးတယ်။
ဟုတ်တယ် ... အဲလို အဆင်ပြေတာ မြန်မာ၃က ယူနီကုဒ်စံ လိုက်နာတဲ့ ဖွန့် မို့လို့။ ပိတောက်တို့ ပုရပိုက် တို့ဆိုတာတွေ ရှိသေးတယ်။ မြန်မာ၃လေးက လှတယ်ထင်လို့ ရွေးလိုက်တာ။ ဇော်ဂျီကတော့ ယူနီကုတ်စံ မဝင်ဘူးပေါ့။ ယူနီကုတ်ဖွန့်နဲ့ဆို space ခြားချင်ရင် cursor လေး ချလိုက်တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စာလုံးကို သူ့အတွဲနဲ့တူ ခွဲပေးတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ရိုက်ရတာလဲ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ယူနီကုတ်စံ အကြောင်း ရေးထားတာ ဖတ်မိကတည်းက ပြောင်းသုံးပစ်လိုက်တာ။ အဲဒီတုန်းက တော်တော်လေးကို အိုင်တီသမား တွေကြားထဲ အငြင်းပွား၊ စာတွေရေး ရန်ဖြစ်ကြသေးတယ်လေ။ :D ကိုယ်လည်း ဟိုဖတ်သည်ဖတ်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ယူနီကုတ်ကို ရွေးချယ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။ ဇော်ဂျီကတော့ မရှိသုံးလေး သုံးခဲ့တာပေါ့။
ဒါဆို လက်ပတော့ အသစ်ရရင် ကလိတော့နော်။
မီးမီးငယ် February 11, 2014 at 10:27 AM
Iora February 11, 2014 at 6:21 PM
အဲဒီနှင်းတွေတွေ့ တော့မီးမီးတုို့ ကိုသတိရနေတာ။
ကုိုယ်တုို့ ကိုအလုပ်နှစ်ရက်အရေးပေါ်ပိတ်ပေးလို့ ပျော်တာ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) February 12, 2014 at 12:32 AM
ခုတလော ခရီးက ပြန်လာတာမို့လို့ ဟင်းကောင်းကောင်း မစားဖြစ်ဘူး…
အိုင်အိုရာဟင်းတွေမြင်ပြီး သွားရည်တောက်တောက်ကျတယ် တကယ်ပြောတာ..
အဲဒီဟင်းလေးတွေနဲ့သာ စားလိုက်ရမယ်ဆိုရင် နတ်ပြည်ဆယ်သက် တကယ်မမက်ပါတယ် လို့ အော်လိုက်ရမလိုဖြစ်သွားမယ် ထင်တယ်။ 
ဒီဟင်းတွေမြင်ပြီး အိမ်လာလည်ချင်လိုက်ထှာ 
ဒီမှာတော့ အတူနေတဲ့ ညီမလေးက ထမင်းဟင်းကို သူပဲချက်တာ သူက ငပိမစားတော့ ဗမာဟင်းတွေ လုံးဝကို မချက်သလောက်ပဲ… ကိုယ်ကလဲ ပျင်းနေတော့ သူချက်တာ စားရတဲ့ဘဝမှာ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ် ဖြူတူတူဟင်းတွေနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရတယ် .
Iora February 12, 2014 at 8:53 PM
ကုိုယ်ကလေမြန်မာပြည်မှာတုန်းက ငပိချက်တော့ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဟင်းထဲမှာငပိစော်နံနေရင်မကြိုက်ဘူး။ သိပ်ဂျီးများတယ်။
သူများချက်ပေးတာဇိမ်နဲ့ စားရတာကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်။ ဘယ်ဂျီးများလို့ ဖြစ်မလဲ။
ကုိုယ်တုို့ မှာကုိုယ်ချက်မှကုိုယ်စားရမုို့ လုပ်ချင်တာလုပ်နေတာ။ ချက်ကျွေးတဲ့သူရှိရင်ကျွေးသလိုပဲစားမှာ။း)
အိမ်လာလည်တဲသူမှန်သမျှထမင်းအတင်းကျွေးလို့ ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလာဖုို့ တောင်တွန့် နေပြီ။ လာလည်လို့ ကတော့ကျွေးပြီးသား။း)
monmon yoko February 12, 2014 at 10:49 AM
အစ်မရေ စားစရာတွေကအကုန်စားချင်စရာ။အဲလိုအစားအသောက်တွေ မစားဖြစ်တာကြာပီ။ ခုချိန် ပံတူရေးပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဘေးမှာရှိနေရင် ကိုယ်.ရဲ. ဟင်းပုံတွေကြည်.ပီး ဂလု ဂလု ဖြစ်နေတဲ.ပုံကိုဆွဲဖြစ်ခဲ.ရင် ဘယ်ပန်းချီရေးလို.မမှီ ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ ဟဲ။
Iora February 12, 2014 at 8:34 PM
မွန်မွန်က ဂျပန်စာလေးတွေစားဖြစ်တော့ပုိုပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာပေါ့။
အဲဒီပန်းချီကားကုိုတင်လိုက်ရင်တော့ မိုနာလီဇာ..အရှုံးပေးရတော့မယ်ထင်တယ်။း)
Iora February 12, 2014 at 8:29 PM
အမေဇုန်ကပြောင်းနေသလားမသိဘူး။ မ မွန်မွန် ပေးတဲ့လင့် နှစ်ခု ကုို ကော်ပီဆွဲပြီး ရှာကြည့်တာမပေါ်လာဘူး။ အမြဲပြောင်းနေလို့ လားမသိဘူး။ တခုချင်းနောက်ကနေ ဒီလိ(တ်) လုပ်ပြီးရှာတာလည်းမရဘူး။ အားနာလိုက်တာ။ သူတပါးကအချိန်ကုန်ခံရှာပေးထားတာကို။ လင့်ထဲကပါတာထရေ့ စ်လုပ်ကြည့်ပြီး Ibo-No-Ito-Somen-10-58oz နဲ့Hime-Dried-Somen-Noodles-28-21-Ounce ကုို သပ်သပ်ရုိုက်ပြီးရှာကြည့်တယ်။ Hime-Dried-Somen-Noodles က wheat ကလုပ်တာဆုိုတော့ဟုတ်ပါ့မလားမသိဘူး မွန်မွန်ပြောတဲ့ဟာ။
အရမ်းအားနာတယ်။ ထပ်မရှာနဲ့ တော့နော်။
မုန့် ဟင်းခါးဖတ်အနေနဲ့ က ဗီယက်နမ်ထု့တ်ကိုသုံးတာများတော့ ဆုိုမင်ကုိုကုိုယ်တုိုင်တခါမှမပြုတ်ဖူးဘူး။ သူငယ်ချင်းကျွေးလို့ တော့စားဖူးတယ်။ ပြုတ်နည်းလည်းသိချင်တာပေါ့။ မွန် မွန်အချိန်တွေအရမ်းပေးနေရမှာအားနာတယ်။ ပုို့ စ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ပါလား။ ဒါဆုိုသူများတွေလည်းဖတ်ရတာပေါ့။
Ma Tint February 17, 2014 at 2:35 AM
ဒီဘလော့လေးကိုရောက်ရင် မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ဟင်းစုံမုန့်စုံနဲ့ ကြုံတော့မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်...
ကျေးဇူးပါ အိုင်အိုရာရေ... တီတင့်လဲ လွတ်သွားတဲ့ပို့စ်တွေ တစ်ပုဒ်ချင်းဖြိုနေတယ် ...
Anonymous February 17, 2014 at 5:14 PM
တကယ်တော့အိုင်အိုရာလည်းစိတ်မအားလူမအားကွန်ပြူတာကလည်းအချိန်ပေးပြီးဖျက်စရာရှိတာတွေဖျက်ပြီးအပ်ပ်ဒိတ်လုပ်ဖုို့ လိုနေလို့ မရေးဖြစ်တာကြာလှပါပြီ။ လာလာဖတ်တဲ့သူတွေလည်းအားနာလို့ ဖျစ်ညှစ်ပြီးတင်နေတာ။ သိပ်တောင်သပ်သပ်ယပ်ယပ်မရှိဘူးရယ်။
Ma Tint February 18, 2014 at 9:03 PM
စာဖတ်သူတို့အပေါ်ထားတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စေတနာလေးပေါ့ အိုင်အိုရာရေ... <3
Iora February 20, 2014 at 6:24 PM
မအိုင်အိုရာ ကျေးဇူးနဲ့ ကဆစ်သီးကို သိလိုက်လို့ ဒီတပတ်ဈေးဝယ်သွားတော့ တွေ့တာနဲ့ဝယ်ပြီး ဒီနေ့ပဲ ကဆစ်သီးထောင်းစားလိုက်တယ် အစ်မရေ ။။။။ စားလို့အရမ်းကောင်းလို့ ကျေးဇူးပါနော် ။။။။
Iora February 20, 2014 at 6:37 PM
ကုိုယ်လည်းစားကောင်းလို့ သဘောကျနေတာ။ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့စုကုိုကျေးဇူးတင်နေတာ။
ခုတလော အရှုပ်တွေလုပ်နေတာ အဲလေ အလုပ်တွေရှုပ်နေတာ နဲ့ မမဆီ အခုမှရောက်ဖြစ်တယ်.
အားပါးပါး စားစရာတွေ အများကြီးပဲ မိုးစက်အကြိုက်တွေလဲ အများကြီးပဲ.. ငပိရည် တို့စရာကလဲ အကြိုက်ပဲ.
ဘယ်အချိန်ကျွေးကျွေး မငြင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကလဲ ကြိုက်တယ် မမရယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် ...စားချင်လာပြီ.။း)
Iora February 23, 2014 at 6:28 PM
ပျောက်ချက်သားကောင်းနေလို့ နေမှကောင်းရဲ့ လားလို့ တွေးနေတာ။
တခါချက်ရင်သုံးလေးရက်စားလုို့ ရပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲကုန်သွားတာနဲ့ စားချင်ပြန်ရော။
ဘူးသီးရှိတဲ့အခါဆုိုဟင်းချက်စားတာထက်ဘူးသီးကြော်ပဲကြော်စားနေတာ။ အဲလိုကြော်လို့ မုန့် ဟင်းခါးစားချင်မုန့် ဟင်းခါးစားချင်လို့ ဘူးသီးကြော်နဲ့ မုန့် ဟင်းခါးသံသရာထဲမှာလည်နေတာ။
မုန့် ဖတ်ကုန်သွားလို့ မစားရတဲ့အခါလည်းရှိ။ ခုတော့မုန့် ဖတ်ထုတ်တွေပြန်စုထားတော့နောက်တစ်ပါတ်ချက်ဖြစ်အုန်းမယ်ထင်တယ်။း)
ညီမလည်း အင်ဒီးယန်းဆိုင်ကပဲဝယ်တာ အစ်မရေ ။ အစ်မဓာတ်ပုံကို သေသေချာချာကြည့်သွားပြီး လိုက်ရှာဝယ်လိုက်တာ။ ဒီမှာ ကိုယ်စားချင်တာက မရှိတာများလို့ .. ကိုယ်စားလို့ဖြစ်မယ့်ဟင်းအမယ်လေးတွေကို လိုက်ရှာမှတ်ရတာလည်း အလုပ်တစ်ခုလိုပဲ။ အစ်မတို့ ဘလော့ဂ်လေးတွေရှိနေတာ အရမ်းကို အဆင်ပြေတာ။
ကျေးဇူး အစ်မရေ ။ ထပ်လာလည်သွားတယ်နော်။ :)
Iora February 25, 2014 at 5:34 PM
ဒီတပါတ်အင်ဒီးယန်းဆုိုင်သွားဖြစ်သေးတယ်။ အဲဒီကဆစ်သီးတွေအပြင်နောက်ထပ်မသိသေးတဲ့အသီးခပ်ကြီးကြီးတွေတွေ့ ခဲ့တယ်။ လေ့လာလိုက်အုန်းမယ်။ ဘယ်လိုစားကြသလဲလို့ ကောင်းမဲ့ပုံပေါက်ရင်တော့နောက်တစ်ခါသွားရင်စမ်းဝယ်အုန်းမယ်။
ထုံးစံအတုိုင်းကြက်ဟင်းခါးသီး၊ခရမ်းသီးနဲ့ ဘူးသီး၂လုံးတောင်ဝယ်လာတယ်။ ဗုံလုံသီးလည်းဝယ်ခဲ့တယ်။ တင်ထားသမျှနီးနီးဝယ်လာတာဘဲ။း)
ဟန်ကြည် February 25, 2014 at 6:28 AM
ကဆစ်သီးဆိုတာတော့ အခုမှပဲ မြင်ဖူး ကြားဖူးတာပဲဗျို့...အညာမှာ မရှိလို့လားတော့မသိဘူး...း)
ပုံတွေကြည့်ရတာနဲ့တင် အတော်တန်သွားပြီ...နောက်တစ်ခါဆိုရင် ပုံမကြည့်ခင် အရင်ပေါင်ချိန်ထားရမယ်...ညှော်ခံရင်းနဲ့ ၀ိတ်တွေတိုးလာတယ်ထင်လို့...း)
Iora February 25, 2014 at 7:44 PM
ညှော်ခံရင်းနဲ့ ဝိတ်တုိုးလာတယ်ထင်လို့ ...ဆိုတာတော့သဘောကျသွားပြီ။
A Happy Day သုို့ မဟုတ် အင်ဒီးယန်းဆုိုင်မှအပြန်